Wararka - Sida loo kululeeyo muujinta LED -ka dibedda si wax ku ool ah
Sababtoo ah pixels cufan ee muujinta LED, waxay leedahay kuleyl weyn. Haddii dibedda loo isticmaalo muddo dheer, heerkulka gudaha waxaa hubaal ah inuu si tartiib tartiib ah u kici doono. Gaar ahaan, kulaylka baahinta aagga weyn [bandhigga LED -ka bannaanka] ayaa noqday dhibaato ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo. Kala -daadinta kuleylka ee muujinta LED -ka ayaa si dadban u saameeya nolosha adeegga muujinta LED -ka, oo xitaa si toos ah u saameeya adeegsiga caadiga ah iyo badbaadada muujinta LED -ka. Sida loo kululeeyo shaashadda bandhigga ayaa noqotay dhibaato ay tahay in la tixgeliyo.
Waxaa jira saddex siyaabood oo aasaasi ah oo kulaylka loo kala wareejiyo: tabinta, gudbinta iyo shucaaca.
Kulaylinta kulaylka: gudbinta kulaylka gaasku waa natiijada isku dhaca u dhexeeya maaddooyinka gaaska ee dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn. Kordhinta kuleylka ee kaariyaha birta waxaa inta badan lagu dhammeeyaa dhaqdhaqaaqa electrons lacag la'aan ah. Kordhinta kuleylka ee adag ee aan tabin waxaa lagu gartaa gariirka qaab dhismeedka daaqadda. Habka kuleylka kuleylka dareeraha badanaa wuxuu ku xiran yahay ficilka mawjadda laastikada.
Isku -duubid: waxaa loola jeedaa hannaanka wareejinta kulaylka oo ay sababtay barokac qaraabo oo u dhexeeya qaybaha dareeraha. Maroojintu waxay ku dhacdaa dheecaanka oo kaliya waxaana weheliya socod kuleyl. Habka isdhaafsiga kuleylka ee dareeraha ka soo qulqulaya shayga dushiisa waxaa la yiraahdaa wareejin kuleyl kuleyl ah. Qulqulka ka dhasha cufnaanta kala duwan ee qaybaha kulul iyo qabow ee dareeraha waxaa lagu magacaabaa dheelitirka dabiiciga ah. Haddii dhaqdhaqaaqa dheecaanka ay keenaan xoog dibadeed (fan, iwm), waxaa lagu magacaabaa qasba qasab.
Shucaac: habka shaygu awooddiisa ugu wareejiyo qaab mawjadaha elektromagnetic -ka ah waxaa lagu magacaabaa shucaaca kuleylka. Tamarta shucaaca waxay ku wareejisaa tamarta meel bannaan, waxaana jira qaab -beddelidda qaabka tamarta, taas oo ah, tamarta kuleylka waxaa loo rogaa tamar iftiin leh iyo tamarta iftiimaya ayaa loo rogaa tamar kuleyl.
Qodobbada soo socda waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo habka kala -baxa kuleylka: qulqulka kuleylka, cufnaanta awoodda mugga, isticmaalka tamarta guud, aagga dushiisa, mugga, xaaladaha deegaanka shaqada (heerkulka, huurka, cadaadiska hawada, boodhka, iwm.).
Marka loo eego habka gudbinta kuleylka, waxaa jira qaboojin dabiici ah, qaboojin hawo qasab ah, qaboojin dareere toos ah, qaboojin uumi ah, qaboojin heerkulbeeg, kuleylka kuleylka kuleylka iyo hababka kale ee kuleelka.
Habka naqshadaynta kulaylka
Aagga isdhaafsiga kuleylka ee kuleylinta qeybaha elektiroonigga ah iyo hawo qabow, iyo farqiga heerkulka ee u dhexeeya kuleylka qeybaha elektiroonigga ah iyo hawo qabow ayaa si toos ah u saameynaya saameynta kala -daadinta kuleylka. Tani waxay ku lug leedahay naqshadeynta mugga hawada iyo marinnada hawada ee sanduuqa bandhigga LED. Naqshadaynta marinnada hawo -mareenka, waa in tuubooyin toosan loo adeegsadaa in hawada la gaadhsiiyo intii suurtogal ah, oo waa in la iska ilaaliyaa qaloocyada iyo foorarka fiiqan. Marinnada hawo -mareenka waa inay ka fogaadaan fiditaan degdeg ah ama foosha. Xaglaha fidinta waa inaysan ka badnaan 20O, iyo xagasha foosha waa inaysan dhaafin 60o. Tuubada hawo -qaadistu waa in la xidhaa ilaa inta suurtogalka ah, oo dhammaan laabashadu waa inay ahaadaan dhinaca socodka.
Tixgelinta naqshada sanduuqa
Daloolka hawada waa in la dhigaa dhinaca hoose ee sanduuqa, laakiin aan aad loo hoosayn, si looga hortago wasakhda iyo biyaha inay galaan sanduuqa dhulka lagu rakibay.
Hawo -mareenka waa in la dhigaa dhinaca sare ee u dhow sanduuqa.
Hawada waa inay ka soo wareegtaa xagga hoose ilaa xagga sare ee sanduuqa, waana in la adeegsadaa gelitaanka hawada gaarka ah ama daloolka qiiqa.
Hawada qaboojinta waa in loo oggolaadaa inay dhex marto qaybaha elektiroonigga ah ee kululaynta, iyo wareegga gaaban ee socodka hawada waa in laga hortagaa isla waqtigaas.
Meesha laga soo galo iyo meesha laga soo galo waa in lagu qalabeeyaa shaashad shaandheeye si looga hortago in wasakhdu gasho sanduuqa.
Naqshaddu waa inay ka dhigtaa dheelitirka dabiiciga ah inuu gacan ka geysto isu -gudbinta qasabka ah
Naqshadayntu waa inay hubisaa in meesha laga soo galo hawada iyo dekadda qiiqa ay aad isugu kala fog yihiin. Iska ilaali in dib loo isticmaalo hawo qaboojinta.
Si loo hubiyo in jihada godka hiitarka ay barbar socoto jihada dabaysha, godka hiitarka ma xiri karo waddada dabaysha.
Marka marawaxadda lagu rakibo nidaamka, marin -haweedka iyo soo -bixiyaha badiyaa waa la xiraa iyada oo ay ugu wacan tahay xaddidnaanta qaab -dhismeedka, qalooca wax -qabadkiisuna wuu is -beddeli doonaa. Marka loo eego waayo -aragnimada wax -ku -oolka ah, marin -haweedka iyo marin -haweedka waa inay 40mm u jirtaa xayndaabka. Haddii ay jirto xaddidaad bannaan, waa inay ahaataa ugu yaraan 20mm.
Waqtiga dhejinta: Mar-31-2021